ယခင်ကထက်ပို၍ ယနေ့ခေတ်တွင် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု မည်မျှ စည်းရုံးသည် နှင့် အဖွဲ့အတွင်း အဖွဲ့သားများမည်သို့ ဆောင်ရွက်သည် တို့သည် အဓိက ဦးစားပေးအချက်များဖြစ်ပါသည်။ ဤအစီအစဉ်တွင် ခေတ်ဟောင်းပုံစံ မန်နေဂျာများအား အနာဂတ်၏ စိန်ခေါ်မှုများကို ရင်ဆိုင်နိုင်မည့် အားကျဖွယ်ကောင်းသော၊ အားမာန်တက်ကြွသော၊ ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စွမ်းရှိသော ခေါင်းဆောင်များအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်ရန် ကူညီပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
အဆင့် ၈ ဆင့် ရှိ စီမံဆောင်ရွက်ခြင်း နှင့် အောင်မြင်သောခေါင်းဆောင်မှုကို ဖြစ်ပေါ်စေသည့် အရာ ၅ မျိုးကို သိရှိ၍ ကျွမ်းကျင်အောင် လေ့ကျင့်ပါ။ ဤသို့အားဖြင့် သင့်သည် စွမ်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ မျှော်မှန်းချက်များကို သတ်မှတ်၍ ၄င်းတို့နှင့် သွေဖည်ခြင်းမရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သူ ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။ အခြားသူများ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများကို အသိအမှတ်ပြု၍ ထိရောက်သော လမ်းပြမှု နည်းနာများဖြင့် ၄င်းတို့အား ရည်ရွယ်ချက်များသို့ရောက်ရှိအောင် ကူညီပါ။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကို ဖြစ်ထွန်းစေသော ဖြစ်စဉ်များကို ရှာဖွေ၍ လုပ်ဆောင်ရမည့်တာဝန် နှင့် ပင်ကိုယ်အားသာမှုတို့ကို တွဲဖက်မိအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပါ။
နည်းစနစ်များဖြင့် ကောင်းစွာခေါင်းဆောင်တတ်သော ခေါင်းဆောင်များသည် ဝန်ထမ်းများကို တွန်းအားပေးစရာမလိုဘဲ တက်ကြွစေသော၊ အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်နိုင်စေသော ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ဖန်တီးတတ်ကြပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ နည်းစနစ်များသည် အသင်းအဖွဲ့စိတ်ဓာတ် နှင့် အချင်းချင်းယုံကြည်မှုကို အားကောင်းစေပြီး ပိုမို စည်းရုံးသော၊ ဖန်တီးမှုရှိသော၊ တိုးတက်မှုကိုဖြစ်ထွန်းစေသော လုပ်ငန်းခွင်တစ်ခုကို ဖြစ်တည်စေပါသည်။ သင့်အဖွဲ့အစည်းကို စိတ်ဓာတ်တက်ကြွအောင် လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ရန် စွမ်းရည်များကို သင့်ရရှိလာလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ကဲ … ဒီထက်ပိုပြီး ဘယ်အရာက တန်ဘိုးရှိနိုင်ပါဦးမလဲ?
သင်ကိုယ်တိုင်၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကိုလည်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်အောင် တိုးမြှင့်နိုင်ပြီး ပိုမို စွမ်းရည်ပြည့်သော ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာစေပြီး အဖွဲ့အစည်းအတွင်း သင့်ရဲ့ တန်ဘိုးလည်း မြင့်တက်လာပါလိမ့်မည်။ တစ်ကိုယ်ရည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရည်မှန်းချက်များကို အဖွဲ့အစည်း၏ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်များနှင့် နည်းဗျူဟာကျကျ ချိန်ညှိုခြင်းအားဖြင့် ထိုလမ်း နှစ်သွယ်စလုံးသည် ပြောင်မြောင်သော စွမ်းဆောင်ရည်အဖြစ်သို့ ဦးတည်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဤသို့ဖြင့် သင်သည် ချန်ပီယံ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်လာပါလိမ့်မည်။
08/13/2020 - 09/24/2020
အချိန်: 5:00 PM - 8:30 PM
ကြာချိန်: Seven Consecutive Thursdays
အချိန်: 8:00 AM - 4:00 PM
ကြာချိန်:3Consecutive Days
အချိန်: 7:30 AM - 3:30 PM
ကြာချိန်: Three Consecutive Days 07/22, 07/23, 07/24
ကြာချိန်:3days
09/10/2020 - 12/2/2020
အချိန်: 7:30 AM - 12:30 PM
ကြာချိန်: Every Thursday for7weeks.
09/11/2020 - 11/27/2020
အချိန်: 7:00 AM - 12:00 PM
ကြာချိန်: POSTPONED Every Friday for7weeks.
အချိန်: 9:00 AM - 4:30 PM
ကြာချိန်: Available through small group and 1 - 1 coaching as agreed
အချိန်: 7:00 AM - 4:00 PM
ကြာချိန်: Runs3Consecutive Days
အချိန်: 7:30 AM - 4:00 PM
ကြာချိန်: SPECIAL OFFER – TRAIN ONLINE NOW & IN-PERSON LATER! Due to Covid-19, all attendees can get started with FREE LIVE-ONLINE training right away! Register Now for this in-person course and you’ll receive access to the online equivalent (value $1,695) held on Tuesdays beginning April 28, May 5, 12, 19 from 9am - 12 pm EST Any program can be rescheduled. You can choose ANY class dates later this year for your in-person, 3-consecutive day class. View alternate dates in Tampa at https://www.dalecarnegie.com/en/courses-v2/200?franchise_id=43655 More dates for the online sessions will be scheduled every month.
ကြာချိန်: Three Consecutive Days 08/19, 08/20, 08/21
ကြာချိန်: POSTPONED Every Monday for7weeks.
အချိန်: 6:00 PM - 10:30 PM
ကြာချိန်:7jeudis soirs du 01 octobre au 12 novembre 2020
အချိန်: 6:30 PM - 10:00 PM
ကြာချိန်: 7日 7-Day (2020/10/6, 13, 20, 27, 11/10, 17, 24)
အချိန်: 2:00 PM - 4:00 PM
ကြာချိန်:7Consecutive Tuesdays (Skip week of Thanksgiving)
အချိန်: 8:00 AM - 5:00 PM
ကြာချိန်: Three Consecutive Days 12/16, 12/17, 12/18
ကြာချိန်: Three Consecutive Days 11/18, 11/19, 11/20